NORWAY: Haweeney farta qaniinyo looga gooyay gudaha masjidka Tawfiiq - Calanka.com
Dagaal gacan-ka-hadal ah oo shalay gelinkii dambe labo dumar ah ku dhex maray gudaha masjidka soomaalida ee Tawfiiq ayaa sababay in mid ka mid ah haweenkaasi qaniinyo farta looga jaro.
” – Waxaan hakad gelinay bixinta lacagtii aan siin jirnay masjidka Tawfiiq sababo la xiriira in aan garaneyn cidda saxda ah ee maamulka u haysa. Laba kooxood ayaa warqado noosoo kala dirsaday oo midba lacag gooni u dalbanaya kuwaas oo labaduba adeegsanayaan magaca Tawfiiq Islaamic Center “, ayay tiri Hege Skaanes Nyhus, oo madax ka ah lacag bixinta xarumo-diimeedyada gobolka Oslo iyo Viken.
Masjidka soomaalida ee Tawfiiq ayaa ah kan ugu macaamiisha badan dalka Norway, waxaana u diiwaangashan in ka badan siddeed kun oo macaamiil ah.
NORWAY: Maal-qabeen xaaskiisa dilay oo muddo 2 sano ku dhow sirayay booliska oo la xiray
Wadaad laga eryay Norway oo wali madax-xanuun ku haya shacabka magaalada Kongsvinger